Currency convert - paIndaneti Kutendeuka chero nyika mari kuti nhasi unodiwa. Dashboard yako pachako nekokushandura mitengo uye mutengo charts yepasi rese mari. 173 mari chaiyo-nguva data.
Awa Zuva Vhiki Mwedzi 3 months Gore 3 years Makore gumi
USD - US dhora EUR - Euro GBP - paundi wakanaka JPY - Yen CNY - Currencykuva RUB - Russian Ruble AUD - Aussie dhora AZN - Azerbaijani manat ALL - Albanian naAmareki DZD - Algerian Dinar XCD - East Caribbean dhora AOA - Kwanza MOP - Macanese pataca ARS - Argentine Peso AMD - Armenian dram AWG - Aruban florin AFN - Afghan afghani BSD - Bahamian dhora BDT - Bangladesh kukurouka BBD - Barbados dhora BHD - Bahrain Dinar BYR - Belarusian Ruble BYN - Belarusian Ruble BZD - Belize dhora XOF - CFC Franc BMD - Bermuda dhora BGN - Bulgarian Lev BOB - Bolivian boliviano BAM - Bosnia and Herzegovina convertible chiratidzo BWP - Botswana pula ye BRL - Brazilian chaiyo BND - Brunei dhora SGD - Singapore dollar BIF - Burundi Franc BTN - Bhutan Dollar INR - Indian Rupee VUV - Vanuatu Vatu HUF - Hungarian Forint VEF - Venezuelan bolivar fuerte VND - Vietnamesse dong XAF - CFC Franc HTG - Haitian Lira GYD - Guyana dhora GMD - Gambian dalasi GHS - Ghana cedi GTQ - New Zealand yequetzal GNF - Guinea Franc GIP - Gibraltar paundi HKD - Hong Kong Dhora HNL - Honduran Lempira GEL - Georgian emalari DKK - Danish korona DJF - Djibouti Franc DOP - Dominican Peso EGP - Egyptian paundi ZMW - Zambian Kwacha MAD - Moroccan Dirham ZWD - Zimbabwean dollar ILS - Israeli shekeri itsva IDR - Indonesian Rupee JOD - Jordan Dinar IQD - Iraqi Dinar IRR - Iranian Rial ISK - Iceland Krone YER - Yemeni Rial CVE - Cape Verde shield KZT - Kazakhstani Tenge KYD - Cayman Islands Dhora KHR - Cambodian Riel CAD - Canadian dhora QAR - Qatari Riyal KES - Kenya shilling COP - WeColombia Peso KMF - Comoran Franc CDF - DzokuCongo Franc KPW - North Won Korean KRW - South Korean Won RSD - Serbian Dinar CRC - Costa Rica muura CUP - Cuban Peso KWD - Kuwaiti NZD - New Zealand Dhora KGS - Kyrgyzstani uko LAK - Lao Kip LVL - Latvian Lat LSL - loti ZAR - Rand LRD - Liberia dhora LBP - Lebanese paundi LYD - Libyan Dinar LTL - Lithuanian Rial CHF - Franc Swiss MUR - Mauritius Rupee MRO - Mauritanian Ouguiya MGA - Zimbabwe Dollar MKD - Macedonian raha MWK - Malawi Kwacha MYR - Malaysin Ringgit MVR - Maldivian rufiyaa MXN - Mexican Peso MZN - Mozambican metical MDL - VokuMoldova Leu MNT - Mongolian Vatu MMK - Burmese kyat NAD - Standard dhora NPR - Nepalese Rupee NGN - Malawi Kwacha ANG - Antilliaanse gulden NIO - ZvomuNicaragua Cordoba XPF - French Pacific Franc NOK - Norwegian Krone AED - Brazil Dirham OMR - Euro Rial SHP - Saint Helena paundi PKR - Pakistan Rupee PAB - Panamanian Balboa PGK - Kina PYG - guarani PEN - Peruvian Nuevo Sol PLN - Polish Zloty RWF - Rwandan Franc RON - Romanian Leu XDR - SDR (Special richiswedera kodzero) SVC - Zimbabwean muura WST - notes STD - Sao Zimbabwe Dollar SAR - Saudi Riyal SZL - lilangeni TRY - New Turkish Lira SCR - Seychelles Rupee SYP - Paundi Syrian SKK - Slovak they koruna SBD - Solomon Islands Dhora SOS - Somali shilling SDG - Sudanese paundi SRD - Zimbabwe dollar SLL - Leone TJS - Tajikistani somoni THB - Thai volt TWD - Taiwan itsva dhora TZS - Tanzania shilling TOP - pa`anga TTD - Trinidad uye Tobago dhora TND - Omani Dinar TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan itsva manat UGX - Uganda shilling UZS - Uzbekistan Verengai UAH - Hryvnia UYU - Uruguayan Peso FJD - Fiji dhora PHP - Philippines Peso FKP - Falkland Islands paundi HRK - United Arab Emirates CZK - Czech they koruna CLP - Chilean Peso SEK - Swedish Krona LKR - Sri Lanka Rupee ERN - nakfa ETB - Ethiopian birr JMD - Jamaican dhora SSP - South Sudanese paundi BTC - Bitcoin CLF - Chilean Unidad of Fomento EEK - Estonian Kroon GGP - Guernsey paundi IMP - Manx paundi JEP - Jersey paundi MTL - Maltese Lira XAG - Troy paaunzi sirivha XAU - Troy paaunzi chendarama / Electronic goridhe) ZMK - Zambian Kwacha ZWL - Zimbabwe dollar ATS - YeAustria shilling AON - Zimbabwean itsva Kwanza BEF - YeBelgium Franc GRD - Greek yemadhirakema IEP - Irish paundi ESP - Spanish peseta ITL - Italian Lire CYP - Cyprus paundi DEM - Deutsche chiratidzo NLG - Netherlands guilder PTE - Portuguese shield SIT - Slovenian tolar SRG - Zimbabwe guilder FIM - Zenze mucherechedzo FRF - France Frank ECU - ECU YUM - Yugoslavian itsva Dinar
EUR = 1.04 USD
Euro mutengo uri mupenyu chati
GBP = 1.21 USD
Paundi wakanaka mutengo uri mupenyu chati
JPY = 0.007319 USD
Yen mutengo uri mupenyu chati
Currencykuva mutengo uri mupenyu chati
Live Forex Currency Exchange pa 29 Chikumi 2022
Shanduri yemari inoratidza iripo yemari yekutsinhana chero yemari yakasarudzwa yanhasi. Mari yekuchinjana inomisikidzwa nemabhangi epasi rose uye anoita hwaro hwekutarisa hushanduko hwekuchinjana pamari yekushandura kwemari uye mabhangi ekutengesa. Iwe unogona kutevedza mwero wekutsinhanisa webhangi renyika kuti uwane yakanyanya kuchinjana yekutsinhana kutenga uye kutengesa mari.
Iyo inoshandura mari webhusaiti yedu zvakare inoratidza muyero wekutsinhana pane iyo Forex kuchinjanisa. Forex mwero kuvandudza masekondi makumi matatu. Ona chiyero chekutsinhana pamhepo kwemahara uye iye zvino munguva chaiyo.
Mwero wemari pane irinani Forex unosetwa sekondi yega yega, kusiyana nemutengo wemari yenyika wakatemerwa nebhangi renyika kamwe pazuva.
Isu tinogara tichitarisa huwandu hwemadhora zana nemakumi manonwe neshanu, zvese pamitengo yekushambadzira nekutengesa matanho ehurumende. Unogona kutarisa kwemahara mwero wekutsinhana kwemari chero ipi zvayo kune imwe.
Unogona kutevedzera mwero wekutsinhana kwemari imwe chete kuenda kune imwe uchishandisa iyi pachako nzvimbo. Chiyero chekutsvagisa chinoratidzwa muchimiro chegirafu nehuwandu, shanduko yezviyero inoratidzwa mumunda wakaparadzana sepesenti. Iko kusimudza uye kuderera kwemari yemari inoratidzwa mune dzakasiyana mavara.
Yakanyanya Mari Yekuchinjana Resa
Iwo akanakisa kuchinjanisa inogona kutariswa nema graphs ekuchinja nekukasira pamwero wekuchinjana pane saiti mapaneru kana pane mapeji einternet emari yekuchinjana yemari kubva kuinternet Forex. Imwe nzira yekutarisa yakanyanya mwero ndeyekutarisa nguva dzose shanduko mumari yakasarudzwa, uye kana chiyero chemari yemari ichiratidza kukosha kushoma, ino ndiyo nguva yakanaka yekutenga, uye kana iyo yakakwira iri yekutengesa mari.
US dhora mwero wekutsinhanha nhasi
US dhora mwero wekutsinhanha nhasi ndiyo ruzivo rwekutanga runoshandiswa nevanhu vazhinji. Iwe unogona kutsvaga iyo official US dhora mwero wekutsinhanha nhasi kune chero mari yenyika pane webhusaiti yedu.
Isu tinotarisa huwandu hwekutsinhana kwemari yose zuva rega uye isu tinoziva chiyero kwete chechanhasi, asi yezuva rega rega kubva 1992.
Yanhasi US dhora mwero wakaiswa semhedzisiro yekutengesa pakati pezuro. Nekudzidza shanduko mu US dhora huwandu hwekutsinhana online nezuro, unogona kufanofungidzira pamutemo kuchinjanisa nhasi.
US dhora mwero wekutsinhana mangwana
US dhora mwero wekutsinhana mangwana inoumbwa nebhengi renyika pahwaro hwe US dhora kutengeserana pane iyo Forex uye mamwe misika yekutsinhana nhasi. Mangwana US dhora ndiyo nheyo yekutsinhana kwe US dhora mubhangi on .
Saka, nekutarisa shanduko mu US dhora mukati mezuva pane exchange pane webhusaiti yako, iwe uchave kukwanisa kufanotaura izvo US dhora chiyero chemangwana uye US dhora kuchinjanisa mitengo mumabhangi mangwana .
Gadza kumusoro US dhora yekutevera peji pane peji reimba rewebsite inoshandura mari. Ona US dhora chiyero chekutsinhana pamhepo, uye iwe uchagara uchifungidzira nenzira yakakodzera US dhora mwero wekutsinhana mangwana.
Mwero wekutsinhana we US dhora zvinopesana neiyo euro nhasi
Mwero wekutsinhana we US dhora kurwisa iyo euro yanhasi inoratidzwa pawebsite moneyratestoday.com mune shanduro mbiri:
iyo official exchange rate of US dhora kusvika kune euro yakaiswa nehurumende bhangi yanhasi uye
mwero wekutsinhana we US dhora kune euro pane iyo Forex exchange online
US dhora mwero wekutsinhana kupesana neiyo euro seimwe yemari mikuru pasi rose inosarudza US dhora Gengi rekutsinhana kutarisana nedzimwe nyika dzepasi rose. Track US dhora mwero wekutsinhanha nhasi pane dhibhodhi yepamhepo yewebhusaiti.
Mari inoshandura US dhora pamhepo
Shanduri yemari US dhora online pane yedu webhusaiti inokubvumira kuti uzive US dhora Gengi rekutsinhana kune chero mari yenyika. Isu tinoteedzera zuva nezuva US dhora kusvika 172 mamwe mari yenyika.
Kuti ishandure US dhora zvakanaka mune imwe mari mumabhangi, tevera US dhora chiyero chekutsinhana uchishandisa yedu mawindows.
Euro mari inoshandura online
Mari inoshandura Euro online - iyo yepamhepo sevhisi Euro kune nyika mari. Euro pamhepo shanduko yemari inosanganisira US dhora ku Euro shanduro.
Mari yeEuro yekutsinhana pane iyo Mari yemari yekushandura webhusaiti inogona kutariswa pamhepo mune idzi Calculator
mumadhidheti emunhu oga paaccostestoday.com
pane peji remukuru Euro chiyero chekushandura
mune iyo online service, iyo mwero wekutsinhana kweiyo euro paiyo forex exchange online
Iyo euro inoshandura inoratidza mwero wekutsinhana kune ipi neipi yenyika 172 yenyika. Isu tine iyo euro yekushandura rateti yanhasi uye nhoroondo yekushandurwa kwemauro zuva rega rega kwemakore makumi matatu apfuura.
Euro ku US dhora shanduko yemari pamhepo
Euro ku US dhora shanduko yemari pamhepo - peji re US dhora mwero wekutsinhana pane irinani Forex.
US dhora kurwisa iyo euro inogadziriswa kaviri muminiti imwe.
US dhora kusvika ku euro exchange rate inogona kutariswa zvose muminiti yekupedzisira, uye muawa, uye pazuva.
Nhoroondo ye US dhora kuUkraine neEuro ku US dhora mitengo yekutsinhana yave iri panzvimbo iyi kubvira 1992. Chiyero chekutsinhana chinowanikwa pachena mazuva ese.
Bitcoin yemari inoshandura online, bitcoin mwero wanhasi
Bitcoin mari yekutendeuka online haina kuratidzwa pane yedu webhusaiti. Moneyratestoday.com inongoteedzera zviri pamutemo zvemari.
Asi iyo Bitcoin yekutsinhana chiyero chemazuva ano ruzivo rwakakosha kune iyo nzvimbo ye crypto.
Pano unogona kuona iyo Bitcoin chiyero chemazuva ano .
Crystalcurrency shanduko online, cryptocurrency mwero
Online cryptocur lwemari inoshandura inogona kuonekwawo pane iyi link iripazasi.
Mitengo yekuchinjana inodarika zviuru zviviri zvemadhora inoteverwa pamhepo pawebhu yemumwe wedu.
Ikozvino crypto iri kuwedzera mukurumbira uye inogona kuita sechinotsiva dhora, euro uye mimwe mari yenyika.